IPHONE နှင့် IPAD ပေါ်တွင်မှတ်ဉာဏ်ကိုရှင်းလင်းဖို့ကိုဘယ်လို - IOS နှင့် MACOS - 2019
အဓိက IOS နှင့် MacOS
IPhone နှင့် iPad ပေါ်တွင်မှတ်ဉာဏ်ကိုရှင်းလင်းဖို့ကိုဘယ်လို
iPhone နှင့် iPad ပိုင်ရှင်များ၏ဘုံပြဿနာများ၏တဦးတည်း, အထူးသဖြင့်မှတ်ဉာဏ်၏ 16, 32 နဲ့ 64 GB အထိအတူဗားရှင်းအတွက် - နေရာ Vault အတွက်ပြီးသွား။ ဒါဟာတောင်မှတချို့ဓါတ်ပုံတွေကိုဖျက်ပစ်ပြီးနောက်မကြာခဏဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုများနှင့် applications များသိုလှောင်ရန်နေရာနေဆဲမလုံလောကျပါပဲ။
စတိုးဆိုင်ထဲမှာနေရာအများဆုံးသိမ်းပိုက်လွတ်လပ်သောဒြပ်စင်သန့်ရှင်းရေး၏ပထမဦးဆုံးအကို manual နည်းလမ်းများ,, ပြီးတော့ - သင့် iPhone ကိုစင်ကြယ်သောတအော်တို "အမြန်" လမ်းအဖြစ်အမှု၌ကူညီစေခြင်းငှါအပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်,: သင်၏ iPhone, iPad ၏မှတ်ဉာဏ်ကိုရှင်းလင်းဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းကိုအသေးစိတ်အတွက် - ဤလက်စွဲစာအုပ် သင့်ရဲ့ device ကိုအလုံအလောက်သင့်ရဲ့ဒေတာတွေကိုသိမ်းထားဖို့မှတ်ဉာဏ် (ပေါင်းလျင်မြန်စွာအိုင်ဖုန်းပေါ်တွင် RAM ကိုရှင်းလင်းမယ့်လမ်း) မပါလျှင်။ iPhone ကို 5s များအတွက်သင့်လျော်သောနည်းလမ်းများနှင့် 6, 6s,7နဲ့ 8 ကိုမကြာသေးမီကမိတ်ဆက် iPhone နှင့် iPhone ကို X တို့မှာ
မှတ်ချက်: App Store မှာအခမဲ့အပါအဝင်အလိုအလျောက်အမှိုက်သရိုက်အစုအဝေးအတွက် "whisk ဖို့" ပလီကေးရှင်းတစ်ခုစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအရေအတွက်လည်းမရှိ, ဒါပေမယ့်စာရေးသူပုဂ္ဂလဒိဋ္ကြောင့်သူတို့ကဒီဆောင်းပါးထဲမှာဆွေးနွေးကြသည်မဟုတ်, ကဘေးကင်းလုံခြုံထိုကဲ့သို့သော applications များသင့်ရဲ့ device ကိုပေါ်မှာရှိသမျှ data ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးဖို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားမထားဘူး ( ဒါပေမဲ့သူတို့က) ဒီမပါဘဲအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေ။
မှတ်ဉာဏ် "ပိတျဆို့နတေဲ့" မှာနှုန်းကိုလျှော့ချရသော, သင်ကိုယ်တိုင် iPhone နှင့် iPad စတိုးဆိုင် clean အဖြစ်အချို့သောအပြင်အဆင်များလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်မည်သို့စတင်ရန်ရန်။
အထွေထွေ - - သိုလှောင်မှုနှင့် iCloud က Settings ကိုသွားပါ။ (က iOS 11 အခြေခံပညာတွင် - သိုလှောင်မှု iPhone, iPad) ။
(က iOS အတွက်အပိုဒျ 11 မဟုတ်ပါဘူး, သင်3step မှ skip နိုငျသညျ, လျှောက်လွှာစာရင်းကိုသိုလှောင် settings ကို၏အောက်ခြေတွင်ဖြစ်ပါတယ်) "သိုလှောင်" အောကျကို item "စီမံခန့်ခွဲမှု" ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
မှတ်ဉာဏ်သင့်ရဲ့ iPhone, iPad ၏အကြီးဆုံးငွေပမာဏကိုသိမ်းပိုက်ပြီးသောစာရင်းအတွက်လျှောက်လွှာ, အာရုံစိုက်။
မြင့်မားသောဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်တကွ, စာရင်း၏ထိပ်ဆုံးမှ, ဂီတနှင့်ဓာတ်ပုံများအပြင်၌, Safari ကဘရောက်ဇာ ( အသုံးပြု. လျှင်), Google Chrome ကို, Instagram ကို, မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်အခြား application များကတက်ရောက်ခဲ့သည်လိမ့်မည်။ ထိုသူအချို့ငါတို့သိမ်းပိုက်သိုလှောင်ရှင်းလင်းနိုင်ကြသည်။
ဒါ့အပြင်သင်သည်လည်းသင်ကိရိယာပေါ်တွင်မှတ်ဉာဏ်ကိုရှင်းလင်းခွင့်ပြုထားတဲ့သစ်ကိုကို item "ဒေါင်းလုပ်ရုံးတင်စစ်ဆေး Application" တွေ့နိုင်ပါသည် applications များမဆိုအားဖြင့် iOS ကို 11 ။ နောက်ပိုင်းမှာညွှန်ကြားချက်များတွင်သင့်လျော်သောအခန်းတွင် - ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုအကြောင်း။
မှတ်ချက်: "ဂီတ" ငါမရေးပါလိမ့်မယ်, ဒီအပလီကေး၏မျက်နှာပြင်မှာရိုးရှင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဘယ်လိုလျှောက်လွှာကနေသီချင်းတွေကိုဖျက်ပစ်ရန်။ ရုံ (ဂီတဝယ်ခဲ့ပါတယ်လျှင်, မည်သည့်အချိန်တွင်မသင့် iPhone မှာနောက်တဖန် Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်) သင့်ဂီတကသိမ်းပိုက်အာကာသပမာဏကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်အရာတစ်ခုခုကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာမကြားလျှင်, ဖျက်ပစ်ရန်အခမဲ့ခံစားရသည်။
Safari ကအတွက် cache နှင့်အချက်အလက်က်ဘ်ဆိုက်များသင့် iOS device ပေါ်မှာသိုလှောင်ရန်နေရာတစ်ခုသိသိသာသာငွေပမာဏယူနိုငျသညျ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဒီ browser ကိုဒေတာသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပေးစွမ်းသည်:
သင့်ရဲ့ iPhone, iPad တွင်ချိန်ညှိချက်များကိုသွားနှင့်အပြင်အဆင်များစာရင်း၏အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ Safari ကရှာပါ။
Safari ကမှာ "Clear ကိုသမိုင်းနှင့်ဆိုက်ဒေတာ" setup ကို (အချို့ဆိုဒ်များသန့်ရှင်းရေးအပြီး re-generate သည့် input ကိုရန်လိုအပ်ပေမည်) ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သင်မကြာခဏမက်ဆေ့ခ်ျများ, iMessage အတွက်အထူးသဖြင့်ဗီဒီယိုနှင့်ရုပ်ပုံများကို send and receive လျှင်, အချိန်ကျော်စာပို့ခြင်း device အတွက်သိမ်းပိုက်ထားသောထိုင်ခုံများ၏အချိုးအစားညစ်ညမ်းသောကြီးထွားစေနိုင်သည်။
တဦးတည်းဖြေရှင်းချက် - ကို "အစီရင်ခံစာများ" "Edit ကို" ကိုနှိပ်ပါအဟောင်းမလိုချင်တဲ့ပြောဆိုမှုများကိုဖျက်သို့မဟုတ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဆွေးနွေးမှုများကိုဖွင့်လှစ်, စာနယ်ဇင်းနှင့် "ပို" ကိုရွေးချယ်မီနူးကနေမဆိုဆက်သွယ်ရေးကိုင်ထားပြီးတော့ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများနှင့်အတူမလိုလားအပ်သောမက်ဆေ့ခ်ျကို select, သူတို့ဖျက်ပစ်သွားပါ။
နည်းမကြာခဏအသုံးပြုကြသည်, အခြားမက်ဆေ့ခ်ျများကသိမ်းပိုက်မှတ်ဉာဏ်၏ရှင်းလင်းခြင်းအလိုအလျောက်ဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေစေသည်: ပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့အသတ်မရှိ device ကိုပေါ်သိမ်းဆည်းထားပေမယ့် settings ကိုသင်အချိန်မက်ဆေ့ခ်ျ၏ကျမ်းပိုဒ်ကိုအလိုအလျောက်ဖျက်ပစ်နေကြသည်စေရန်ခွင့်ပြုထားပါသည်:
မက်ဆေ့ခ်ျများ - Settings ကိုသွားပါ။
ယင်း setting တွင်, "ကို Message သမိုင်း" ကိုကြည့်ပါပစ္စည်းအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဟုမက်ဆေ့ခ်ျကိုချန်ထားပါ။ "
ဒါ့အပြင်ဆန္ဒရှိလျှင်, သင်မက်ဆေ့ခ်ျ post နိုင်ရန်အတွက်အရည်အသွေးနိမ့် mode ကို enable နိုင် settings ကို၏အောက်ခြေတွင်မက်ဆေ့ခ်ျ၏အဓိကစာမျက်နှာပေါ်တွင်လျော့နည်းအာကာသကိုတက်ယူပါ။
တစ်ခုက iPhone ဓါတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုအပေါ် shot - ထိုမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာအများဆုံးအာကာသသိမ်းပိုက်သောသူတို့ကိုပစ္စည်းများတဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ စည်းကမ်း, အသုံးပြုသူအများစုနှင့်အမျှအခြိနျမှနျမှမလိုချင်တဲ့ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ပေမယ့်လူတိုင်းမက "ဓါတ်ပုံများ" application ကိုအင်တာဖေ့စအတွက်ရိုးရှင်းတဲ့ဖယ်ရှားရေးကိုချက်ချင်းဖျက်ပစ်နေကြတယ်, ဒါပေမယ့်တစ်တောင်းထဲ၌နေရာချကြသည်, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ဘဲသိတယ် - အယ်လ်ဘမ် "မကြာသေးခင်က Deleted" ရာကနေ, အလှည့်အတွက်တစ်လအတွက်ဖယ်ရှားပစ်ပါသည်။
သင်ကဓာတ်ပုံကိုမှသွားနိုင်ပါတယ် - အယ်လ်ဘန် - ပြီးတော့မကြာသေးမီကဖယ်ရှား, စာနယ်ဇင်း "ကိုရွေးချယ်ပါ", သင်အပြီးအပိုင်ဖျက်ပစ်ချင်သောသူအပေါင်းတို့သည်သစ်ကိုဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကို mark, ဒါမှမဟုတ်နှိပ်ဖြစ်စေထိုအမှိုက်သွန်ဖို့ "အားလုံးဖျက်ပစ်ပါ" ။
ဓာတ်ပုံ & ကင်မရာ - - ပစ္စည်းပေါ်တွင် "မီဒီယာစာကြည့်တိုက် iCloud" Turn ထို့အပြင် iPhone ကိုအလိုအလျှောက် iCloud ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကို upload လုပ်ဖို့, သူတို့က Settings ကိုသွား, ကိရိယာပေါ်မှာမတည်မနေပါဘူးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုများကိုမိုဃ်းတိမ်ပေါ်သို့ upload တင်ပါလိမ့်မည်အချိန်အတန်ကြာပြီးနောက် (အခမဲ့5GB ကို iCloud များအတွက်ကံမကောင်းသာရရှိနိုင်ပါကသင်သည်အပိုထိုင်ခုံကိုဝယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်) ။
ဆောင်းပါး၏အဆုံးမှာဖမ်းယူထားသည့်ဓါတ်ပုံများနှင့် iPhone ပေါ်မှာဗွီဒီယိုကိုကိုင်မထားဘူး, အရာ (ရိုးရိုး USB ကနေတဆင့်ဖုန်းကိုချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်တဲ့ကွန်ပျူတာသူတို့ကိုလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်ဓါတ်ပုံများမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုခွင့်ပြုသို့မဟုတ် iPhone အတွက်အထူးချောင်းကိုဝယ်ယူရန်အပါအဝင်မဟုတ်) အပိုဆောင်းနည်းလမ်းများ (ကတည်းကရှိပါတယ် သူတို့) Third-party ရန်ပုံငွေ၏အသုံးပြုမှုကိုပါဝင်ပတ်သက်နေ။
Google Chrome ကို, Instagram ကို, Youtube, နှင့်အခြား application များ
ခေါင်းစဉ်နှင့် iPhone နှင့် iPad ပေါ်တွင်များစွာသောအခြား application များသည်လည်း၎င်း၏ cache ကိုနှင့် repository ကိုအတွက် data တွေကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်, အချိန်ကျော် "ကြီးထွား" ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, Built-မှတ်ဉာဏ်ရှင်းလင်းသူတို့ကင်းမဲ့ဆိုလိုသည်။
uninstall နှင့် reinstall လုပ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ် (သို့သော် app ကိုမှ re-အောင်တံခါးဝဖို့လိုပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်က Username နဲ့ password ကိုမှတ်မိဖို့လိုအပ်တယ်) - applications များအားဖြင့်စားသုံးသည့်မှတ်ဉာဏ်ကိုရှင်းလင်းဖို့တလမ်းတည်းဖြင့်ပြုလုပ်အလွန်အဆင်ပြေမဟုတ်ပါဘူး။ ဒုတိယနည်းလမ်း - အလိုအလျှောက်, နောက်ပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားခံရဖို့။
iOS က 11 (ဝန်လျှော့ပေးမှု Apps ကပ) တွင်နယူး option ကိုနေချိန်မှာအသုံးမပြုတဲ့ applications များ
အထွေထွေ - - သိုလှောင်မှုကို iOS, 11 ရက်နေ့မှာအလိုအလျောက်ချိန်ညှိမှုများတွင်ထည့်သွင်းနိုင်သည့်သင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ်အာကာသကယ်ဖို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုအတွက်သင့်ရဲ့ iPhone, iPad applications များအပေါ်ကိုဖျက်ပစ်ရန်သစ်တစ်ခု option ကိုရှိပါတယ်။
သို့မဟုတ်က Settings ထဲမှာ - iTunes Store ကနှင့် App Store မှာ။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, အသုံးမပြုတဲ့ applications များအလိုအလျှောက်ဖျက်လိမ့်မည်ဟု Vault အတွက်အာကာသပေမယ့်လျှောက်လွှာ shortcuts တွေကိုတက်လွတ်မြောက်စေဖို့, ဒေတာနှင့်စာရွက်စာတမ်းများစက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်ရှိနေဆဲကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။ လာမယ့်အချိန်လျှောက်လွှာကအလိုအလြောကျ App Store မှဒေါင်းလုပ်လုပ်မည်ဖြစ်ပြီးအဖြစ်မရောက်မီအလုပ်လုပ်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မည်သို့လျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့ iPhone, iPad ပေါ်တွင်မှတ်ဉာဏ်တက်လွတ်မြောက်
မကြာခဏစက်ပေါ်ရှိအာကာသမျိုးစုံ gigabytes ဖြန့်ချိသော application များသူတို့ကိုယ်သူတို့၏ဖယ်ရှားရေးမပါဘဲတစ်ချိန်ကအားလုံး applications များမှာမလိုအပ်တဲ့ဒေတာဖယ်ရှားပေးထားတဲ့အလျင်အမြန်အလိုအလြောကျ iPhone, iPad ၏မှတ်ဉာဏ်ကိုရှင်းလင်းမယ့် "လျှို့ဝှက်ချက်" လမ်းရှိပါသည်။
(ကရုပ်ရှင်ကြာအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအကြောင်းကိုဒေတာက "Information" ဆိုတဲ့၌မိမိကဒ်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်) အရှည်ဆုံးကြာတနှင့်ဆုံးသောအာကာသ - လုပ်ပြီး iTunes Store ကိုသွားပါနှင့်တစ်ဦးစံပြအတွက်ရုပ်ရှင်ကိုရှာ။ အရေးပါသောအခွအေနေ: ရုပ်ရှင်အရွယ်အစား applications များဖယ်ရှားခြင်းမရှိဘဲသင်၏ iPhone ပေါ်မှာတက်လွတ်သီအိုရီဖြစ်နိုင်ခြေကြောင်းမှတ်ဉာဏ်ထက်ပိုကြီးတဲ့ဖြစ်, သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဓာတ်ပုံများ, ဂီတ, နှင့်အခြားဒေတာ, ဒါပေမယ့်ကိုသာ cache ကို applications များဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်သင့်ပါသည်။
"ငှား" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ သတိပေးချက်: ပထမဦးဆုံးအပိုဒ်အတွက်သတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေကိုသင်ပေးဆောင်ရမည်မဟုတ်အတူပြုလျှင်။ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမဟုတ်လျှင်, ငွေပေးချေရာအရပျယူနိုငျသညျ။
ခဏတစ်ဘို့, ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကို "ထင်" ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲသင်ကမှတ်ဉာဏ်ကိုရှင်းလင်းနိုင်မအရေးမထားဘူးသောသူအပေါင်းတို့သည်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့။ အဆုံး၌ (ကြှနျုပျတို့မြျှောလငျ့ထားရာ) ရုပ်ရှင်အတွက်လုံလောက်သောနေရာလွတ်နိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, "ကိုငှားရမ်း" ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုဖျက်သိမ်းပြီးမက်ဆေ့ခ်ျကိုကြောင်းဖျောပုံပေါ်နေသည် "load ရန်။ အလုံအလောက်မရှိပါမှတ်ဉာဏ်ကို download လုပ်ပါလို့မရပါ။ သိုလှောင်ရေးအတွက် setting တွင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။ "
"Settings" ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်, သင်သိုလှောင်မှုအတွက်အများကြီးပိုပြီးနေရာဖော်ပြထားနည်းလမ်းပြီးနောက်ခဲ့တာကိုဘယ်လိုမြင်နိုင်ပါသည်: များသောအားဖြင့်အနည်းငယ် gigabytes (မကြာသေးမီကသင်တူညီတဲ့နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုကြပြီမဟုတ်ကြောင်းယူဆသို့မဟုတ်သင့်ဖုန်းကိုကျဆင်းနေ) ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အများစုမှာမကြာခဏအိုင်ဖုန်း၏အဓိကရှယ်ယာဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုခေါ်ဆောင်သွားရာအရပျကို ယူ. , အထက်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း, အာကာသသာ5GB ကိုမိုဃ်းတိမ် iCloud အတွက်အခမဲ့ရရှိနိုင် (အပေါင်းတို့နှင့်တကွမိုဃ်းတိမ်ကိုသိုလှောင်ပေးချေရန်မလို) ။
သို့သော်လူတိုင်းမထိုကဲ့သို့သော Google ဓါတ်ပုံများနှင့် OneDrive အဖြစ် Third-party application များသည်လည်းအလိုအလျှောက်မိုဃ်းတိမ်ရန်သင့် iPhone မှဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကို upload တင်နိုင်သည်ကိုသတိပြုမိသည်။ (သူတို့အနည်းငယ် compressed နေကြတယ်ပေမယ့်) တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, အပ်လုဒ်တင်ထားသောဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကို Google ၏ဓာတ်ပုံအရေအတွက်ကန့်သတ်မထားပါ, သင်သည် Microsoft Office ကိုကြေးပေးသွင်းရှိပါကက OneDrive ၌သငျသိုလှောငျကျော် 1 တီဘီ (1000 GB အထိ) ရှိသည်ဆိုလိုတယ် အရာအချိန်ကြာမြင့်စွာကြာရှည်ပါလိမ့်မယ်။ ချပြီးနောက်သူတို့ကိုသင်ဆုံးရှုံးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲ, device ကိုသူ့ဟာသူထံမှဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်။
တဦးတယောက်တည်းကိုသင်သိုလှောင်မဟုတ် clean up လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပိုပြီးနည်းနည်းလှည့်ကွက်များနှင့်အဓိကမှတ်ဉာဏ် (RAM ကို) က iPhone ပေါ်မှာ (အပြောင်းအလဲမရှိဘဲသင် device ကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းဖြင့်ဤအမှုကိုနိုင်ပါတယ်), သတင်းစာနှင့် slider ကိုပုံပေါ် "ဟာ Off" ဖြစ်ပါတယ်သည်အထိပါဝါခလုတ်ကိုကိုင်ထားပြီးနောက် "ကိုနှိပ်ခြင်းနှင့်ကိုင် အိမ် "သငျသညျအဓိကမျက်နှာပြင်ကိုပြန်သွားသည်အထိ - မှတ်ဉာဏ်ရှင်းလင်းပါလိမ့်မည် (သို့သော်အတူတူပါပဲ Home ခလုတ်မရှိဘဲအသစ်သည့်ဒင်္ iPhone ကို X ပေါ်မှာလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဘယ်လောက်မသိရပါဘူး) ။
ဗီဒီယို Watch: iPhone, iPad အတင Myanmar font င Keybaord ထညသငနည (စက်တင်ဘာလ 2019).
https://termotools.com my.termotools.com © IOS နှင့် MacOS 2019